Ciidamada Dowladda Suuriya oo qabsaday qeybo ka mid ah Quuda - BBC News Somali
Ciidamada Dowladda Suuriya oo qabsaday qeybo ka mid ah Quuda
4 Maarso 2018
Ciidamo daacadda u ah dowladda Suuriya ayaa dib u qabsaday 10% dhulkii uu mucaaradka haystay ee bariga Quuda.
Kooxda xaquuqul Insaanka reer Suuriya ee fadhigeedu yahay London ayaa sheegeysa in shalay oo sabti ahayd uu aad u xoogeystay dagaalka ka soconayay dhulka, iyadoo dagaalyahannada fallaagauna ay hoobiyeyaal ku garaacayeen meel u dhow magaalada caasimadda ahi ee Dimishiq.
Qiyaastii 393,000 oo qof ayaa hadda ku xayiran gudaha bariga Quuta, oo ay ciidamada dowladdu go'doomiyeen tan iyo sanadkii 2013.
Keydka cunnada iyo dawada ayaa gabaabsi sii noqonaya, waxaana gaadiidka sida shixnahada gargaarka u suurtageli la' in ay gudaha u galaan dhulkaasi go'doonsan.
Milatariga dowladda Suuriya ayaa sheegaya in uu isku dayayo in waxa uu argagixisada ku tilmaamay uu ka xoreeyo gobolkaasi. Balse waxaa sidoo kale lagu eedeeyay in uu bartilmaameedsanayo dad rayid ah.
Sida ay sheegeyso wakaaladda wararka ee AFP, inkabadan 640 qof ayaa lagu dilay bariga Quuta tan iyo 18-kii bishii Febraayo ee la soo dhaafay. In kabadan 150 ka mid ah dadkaasi ayaa ahaa carruur.
Qiyaastii in kabadan 100 qof ayaa dhimatay tan iyo markii golaha ammaanka ee Qaramada Midoobey uu ku dhawaaqay xabbad joojin muddo bil ah laga soo billaabo usbuucii tegay.
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey António Guterres ayaa sheegay in dadka ku dhaqan bariga Quuda ay ku jiraan "naar ugu timid dunida".
Xabbad joojin shan saacadood maalintiiba ah oo uu Ruushka ku dhawaaqay ayaanan dhaqangelin.
Xukuumadda Moscow oo taageerta dowladda Suuriya ayaa shacabka bariga Quuda u furtay marin ay ku badbaadaan oo ay uga baxaan gobolkaasi balse hay'adda xaquuqul insaanka reer Suuriya ayaa sheegeysa in aysan jirin cid halkaasi ka baxday tan iyo talaadadii la soo dhaafay.
Milatariga Ruushka ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in ilaa iyo shalay oo Sabti ahayd aysan jirin cid martay marinkaasi.
Dhanka kale, woqooyiga dalkaasi Suuriya oo ah furin kale oo ay colaaddu ka socota ayaa ciidamada Turkidu waxay sheegeen in ay la wareegeen gacan ku haynta magaalo ku taalla gobolka woqooyi ee Afrin oo ay maamulaan Kurdiyiinta.
Ugu yaraan 36 ka tirsan ciidamada taabacsan dowladda Suuriya oo gobolkaasi Afrin loogu soo diray si ay garab u siiyaan ciidamada Kurdiyiinta ee dagaalka kula jira ciidamada Turkiga ayaa lagu soo warramayaa in lagu dilay duqeymaha uu Turkiga ka wado gobolkaasi.
Turkiga ayaa hawlgal milatari ka billaabay gobolkaasi Afrin muddo haatan laga joogo lix usbuuc si ay halkaasi uga saaraan maleeshiyaadka Kurdiyiinta oo ay u aragto argagixiso.